Miyaad ixtirameysaa SEO ee liiska Amazon?
Waa wax maskaxeed, laakiin mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo iibintaada Amazon waxaa ku jira riwaayad heer sare ah. Iyo socodka SEO ee liiskaaga Amazon wuxuu si weyn u hagaajin karaa jagooyinkaaga rikoodhada raadinta, oo kuu keenaya horjoogayaasha bartilmaameedka ee macaamiisha aan wali lahayn. Laakiin sida loo bedelo iibsadaha dhabta ah? Waa hagaag, aynu aragno. Halkan waxaa ku qoran tilmaamo SEO ah oo kooban si aad u wado liistada Amazon si sare loogu qaado raadinta internetka iyo soo dhaweynta si aad u ballaadhan daawadayaasha waaweyn ee dukaameeysan. Iyadoo la tixgelinayo in Amazon raadinta alaabta A9 ay si joogto ah isbeddesho, hoosta ayaan bilaabi doonaa iyada oo aqoonsanaya aasaaska ugu muhiimsan ee ereyada muhiimka ah ee ku guuleysta - kaliya si aad u hesho meel adag oo bilawga ololaha ku-meel-gaadhka ah.
Marka dambe, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale sii wadato tallaabooyinka soo socda ee maskaxda lagu hayo tixraaca mustaqbalka. Taas micnaheedu waa ka dib markaad ka shaqeysid cilmi-baaris dhamaystiran oo muhiim ah, waxaa lagugula talinayaa inaad sii wadato bixinta qiimo dhimista, inaad ku qanacsanaato macaamilka macaamiisha badan, hagaajinta qiyaasta wakhtiga iyo wakhtiga lagu bixiyay bogga, adoo isticmaalaya xayaysiisyo kafaala-qaad ah, iyo sidoo kale ku guuleysta Shirkadda iibsiga ee Amazon si ay u xukumaan taas oo suuqa xayeysiis ah.
Aqoonsiga Sare Guud ee Ku Qodashada Furayaasha
Waxyaabahani waa in ay gabi ahaanba ka duwan tahay makiinadaha kale ee raadinta weyn, sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo, Bing, iwm. Xusuusnow, ujeedadaada ugu muhiimsan halkan waa in la hubiyo in alaabtaada aad soo bandhigto ay si fiican u socoto loogu talagalay ereyada muhiimka ah iyo isku-darka raadinta dheer ee suurtogalka ah. Sidaa darteed, si aad u sameyso tirada ugu badan ee shuruudaha raadinta ee habboon, waxaan ku talinaynaa isticmaalka mid ka mid ah qalabyada software-ka iyo qaababka online-ka ah oo si gaar ah loogu talagalay in lagu xakameeyo istaraatiijiyada SEO oo si fiican u habboon ee liiska Amazon ee runtii iibiya:
Sonar - waa qalab cilmi baaris ah oo Amazon ah oo muujinaya dhinacyadooda ugu xoogan marka ay timaaddo aqoonsiga dhamaan ereyada muhiimka ah ee ku guulaystay ee ku xiran alaabtaada ku iibinta, iyo qaabaynta liiska ugu muhiimsan ee raadinta caanka ah codsiyada ay isticmaalaan dukaamada guryaha ee Amazon. Si fudud u geli ereyada muhiimka ah ee aad leedahay ee aad leedahay - inaad hesho aragti qiimo leh oo tartan ah, oo lagu taageerayo talooyin wax ku ool ah oo aad adigu u leedahay in aad ku sifayso suuqa ama qaybta wax soo saarka.
LSI Graph - waa qalab kale oo bilaash ah, taas oo aad u faa'iido leh marka ay timaado geedi socodka si dhakhso ah oo sahlan oo lagu dhalin karo ereyada muhiimka ah ee muhiimka u ah mawduucaaga.
Sellics - waxaa lagula talinayaa marxaladaha ugu horreeya ee cilmi-baarista ereyga muhiimka ah ee Amazon. Waxaan loola jeedaa inaad si fiican u tijaabi lahayd marka hore iyo ugu horreyn markaad u baahato inaad raadiso cilmi-baarista muhiimka ah ee muhiimka ah ee loogu talagalay SEO iyo Amazon listings optimization.
Thesaurus - caawiye this online waxaa laga yaabaa mid ka mid ah hababka ugu yar ee cilmi-baarista muhiimka ah ee muhiimka ah iyo optimization SEO for liiska alaabta on Amazon. Kaliya isku day inaad hesho qaar ka mid ah fikradaha dheeraadka ah ee muhiimka ah ee Ingiriisiga Ingiriisiga, oo si fudud u garto dhammaan magacyada alaabta aan la isticmaalin ee wali aad loogu taliyay in lagu daro ololehaaga socda ee SEO-ga oo loogu talagalay liiska alaabta ee Amazon Source .